‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत २ सय ७२ छात्रालाई साइकल
गौशाला । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा गरी दुई सयभन्दा बढी छात्रालाई साइकल वितरण गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा गई ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सो साइकल वितरण गरिएका हुन् । आजै एकै दिनमा जिल्लाको सरपल्लोमा ७५, मनरामा ४०, गैँडाभेटपुरमा ५२ र रामगोपालपुरमा १०४ गरी २७१ छात्रालाई जनही एक थानका दरले साइकल वितरण गरेका हुन् । विस्तृतमा
तनहुँ तुइनरहित बन्यो
आत्महत्या अघि पुडासैनीले खिचेको भिडियो कसरी बाहिरियो ?
राष्ट्रिय सभाद्वारा प्रहरी समायोजन विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत
'मैले स्व. शालिकराम पुडासैनीको पक्षबाट बहस पैरवी गर्न स्वीकार गरेको रवि जीलाई जेल हाल्न होइन'